30 runtii astaamaha minimalist | Abuurista khadka tooska ah
Minimalism waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu murugsan ee la maareeyo lana yaqaan sida loo hirgeliyo, gaar ahaan markay tahay astaamaha, halkaas oo waayahan dambe mid u janjeero dhanka jilicsanaanta iyo in yar oo ka fudud.
Astaamaha ku harsan boodka ka dib runtii waa wax cajiib ah maxaa yeelay wax yar ayey kugu soo jiiteen, Iyagu waa waxa ugu fudud ee aan soo arkay muddo dheer isla markaana isla waqtigaas waxa aan ugu jeclahay, waxaanan ka baqayaa haddii aad aragto in adigana lagu xiidi doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 30 astaamo runtii aad uyar
Andrew Go dijo
Ujawaab Andres Go
Waxay yihiin adduunka oo dhan, gaar ahaan midka ku saabsan horumarka, waxaan u maleynayay inay fiicneyd
Astaamahan runti waa kuwo fudud oo soo jiidasho leh, waxayna ku helayaan sumcad runtii ay u qalmaan guud ahaan shabakadda oo dhan.
Laakiin mar labaad, waa in la xusuusnaado in sawirradan loo sameeyay (ugu yaraan inta badan) shirkadaha khayaaliga ah, sidaas awgeed waxay ku siinayaan xorriyad aad u weyn oo xorriyad ah markaad magaca dooraneyso. Nasiib darrose, magacyada shirkadda dhabta ahi marar dhif ah ayey ku xidhan yihiin fikradaha asalka ah ee ay iyagu dhiirrigelinta weyn siiyaan.
Magacyada shirkadda ee isku dhafan, iyo sidoo kale astaamaha ugu caansan ama xitaa qurxinta ayaa ka jawaabaya baahida dhabta ah ee adduunka ee aqoonsiga shirkadaha: baahida loo qabo in la istaago oo la aqoonsado suuq caalami ah.
In kasta oo astaanta fudud ay aragti ahaan tahay habka ugu wanaagsan ee suuragalka ah, haddana mararka qaarkood fikrado yar yar oo ka sii murugsan waa in loo weeciyaa maxaa yeelay asal ahaan dhammaan qaababka aadka u fudud waxay xusuusinayaan calaamadaha ganacsiga jira iyo kuwa horay u diiwaan gashan.
Dhinaca kale, istiraatiijiyad dejinta loogu talagalay noocyada qaarkood, mararka qaarkood wax la sawirayo ayaa la doortaa, maxaa yeelay waxay runtii u taagan tahay isbeddelkan muuqaalka iyo casriga ah.
Jawaab E. Serrano
Duck Hernandez dijo
Waxaan si fudud ku raacsanahay Serrano, sameynta astaan ​​shirkad magacyo yar yar adagtahay way adagtahay maxaa yeelay ma bixiyaan xarunta si loo abuuro wax iyaga si dhakhso leh u garanaya, si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa in magacyo sidan oo kale ah oo la siiyay ama amaah lagu siiyay wax hal-abuurnimo way fududahay in la qanciyo macmiilka yaa yidhi
Jawaab Pato Hernandez
Wax igu dhiirrigeliya astaamo qaar ka mid ah qoraalladayda. Salaan